Vidio 1 - Mmekọahụ nke Mmekọahụ (Nkebi nke 1). | Ebumnuche (Njikọ Aka Na-emegide Mmụta Mmekọahụ)
1 vidiyo - Mgbagha Mmekọahụ (Akụkụ 1).
Ihe Na-akpata Mmekọahụ / Site mere
1 vidiyo - Dysphoria nke Nwata.
Nkowa nke nmekorita nke nwoke na nwanyi (Nkebi 1)
Nabata na nke mbụ nke ọtụtụ okwu na isi okwu nke ụbọchị ahụ. Okwu nke Childhood Gender Dysphoria. Abụrụ m ọkachamara n'ihe gbasara ụmụaka, abụkwala m ihe karịrị afọ iri ise n'eziokwu. Enwere m mmasị na nke a ọtụtụ afọ gara aga na ọgbakọ ogbako mgbe m na-agbada n'ụlọ nzukọ wee nụ na enwere okwu a na Childhood Gender Dysphoria. N’ezie, n’eziokwu, amaghị m ihe ọ bụ ruo mgbe m banyere ebe ahụ. Mgbe ahụ echere m, enweghị m ike ikwenye nke a wee malite ịgụ na ileta ndị mmadụ na ozi email na nchegbu m toro nke ukwuu. Yabụ, ihe m ga-ekwu maka ya, n'ezie, abụghị ọrụ m na ya, n'ihi na m ga-ekwu n'ihu n'ihu na emebeghị m nyocha na nke a n'onwe m. Mana m ga-ekwu maka nyocha ndị ọzọ, nke bara ụba. Ma ọ bụrụ na onye ọ bụla chọrọ ịmatakwu, edere m akwụkwọ anọ na magazin Quadrant, nke ga-enye nkọwa karịa okwu a ma nyekwa aka. Yabụ, ndị a bụ ntụaka maka ọrụ ndị ọzọ.
Ya mere, onye ka m bụ? Abụ m dibia bekee. Ana m arụ ọrụ dịka prọfesọ nke ahụike ụmụaka na ọgwụgwọ ụmụaka na Mahadum Western Sydney. Mana ekwesịrị m ịbanye n'ime ma kwuo ugbu a na ọkwa a, anaghị m eme onwe m, ma ọ bụ n'ụzọ ụfọdụ, na-anọchite anya ụlọ ọrụ ahụ. Anọ m ebe a na-ekwu n'onwe m. Azụrụ m ọzụzụ ụmụaka na Sydney, nakwa n'Africa na England ma rụọ ọrụ n'ọtụtụ ụlọ ọgwụ na mba ndị na-emepe emepe. Alaghachiri m ebe a ma bụrụkwa ọkachamara n'ihe gbasara ụmụaka na mgbe ahụ bụrụkwa ọkachamara pụrụ iche n'ilekọta ụmụ amị ọhụrụ na-arịa ọrịa. Abụ m onye nlekọta nke nlekọta kpụ ọkụ n'ọnụ maka ụmụ amụrụ ọhụrụ na North Queensland tupu m laghachite na ọkwa a dị ugbu a.
Yabụ, ndị mmadụ na-ekwukwa, “Ọfụma, ịmebeghị nnyocha na ya, ụmụaka ole ka ị jirila nke a mee?” Obi dị m ezigbo ụtọ na m nwere ike ịsị na 'ọ dịghị onye m na-emeso'. Ugbu a onye ọ bụla na-ekwu, "Ọ dịghị, ị maghị ihe ọ bụla banyere ya." Azịza m na nke ahụ bụ, "Ọfọn, ọ dịtụbeghị mbụ na nke a bụ ihe gbasara mmụọ ugbu a" Ugbu a, ndị na-emegide m ga-asị, "Ọfọn, nke ahụ abụghị eziokwu Ọ nọ ebe ahụ mgbe niile ma ị maghị ya." Azịza m nye nke ahụ bụ, “Ọ dị mma, anọ m na ngalaba mmụta ụmụ akwụkwọ n’ozuzu afọ niile ahụ. Ọtụtụ, ọtụtụ ndị nne na nna ga-eji nkwuwa okwu kwuo banyere nchegbu ha gbasara metụtara mmekọahụ metụtara ụmụ ha. Kindsdị ihe niile. Ma, o nwebeghị onye kwuru, sị, “Nwa m nwoke chere na ọ bụ nwa agbọghọ.” Nke ahụ adịghị gburugburu. Ọbụna na akwụkwọ ọgụgụ, na-alaghachi n'oge na-adịbeghị anya, ekwughi nke a.
Achọpụtara m ndị ọrụ mmekọrịta ụmụaka na iri abụọ na asatọ na ahụmịhe nke narị afọ itoolu na iri atọ na otu wee jụọ ha, “Lee, olee ihe ị chere maka nke a? Oleekwa ole ụmụ ole ị hụrụ n'ezie? ”Ha nwere ike icheta ngụkọta nke iri na abụọ n'ime narị afọ itoolu na iri atọ na otu. Iri n'ime ụmụaka ahụ ha chetara karịsịa n'ihi ọrịa uche metụtara. Abụọ n'ime ha abụwo ndị e mesoro ihe n'ụzọ mmekọahụ.
Ọ na-adịbu n’ezie, na ọ bụrụ na nne ma ọ bụ nna kubie nwa, maọbụ ọ bụrụ na nwa ahụ n’onwe ya na-ekwu na ọ bụ onye ọzọ, ị na-eche ihe na-eme; onye na-emegide nwa ahụ nke ga-eme ka onye na-abụghị nwoke ma ọ bụ nwanyị ibe gị nwee mmasị karịa. Yabụ, ihe m na-ekwu bụ iri na abụọ n'ime narị afọ iteghete na iri atọ na otu, nke ị nwere ike ịkọwa, nke ahụ bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu narị afọ. Kaosinadị, rue ụbọchị a, Septemba, puku abụọ na iri na asatọ, a gwara m na ebuterela ihe karịrị narị ụmụaka atọ n'ụlọ ọgwụ ụmụaka na Melbourne n'ihi Gender Dysphoria. Na narị atọ ugbua afọ a. Yabụ, ọ bụrụ na ị kọwaa na gburugburu Australia, ọ nwere ike ịbụ na otu puku ụmụaka ka ebugara n'ụlọ ọgwụ Paediatrics Gender Dysphoria. Otu ihe ahụ na mba ọdịda anyanwụ. Na United States, onu ogugu enwere ugbua na nke na-agbanwe agbanwe. Western Europe, ọpụpụ ọhụụ ọzọ.
Ihe a aburula oria ojoo. Yabụ, onye ọ bụla na-ese okwu. Ọfọn gịnị bụ ezigbo ihe gbasara ụmụaka Dysphoria nke okike? Ọfọn, kpọgidere na nke abụọ, gịnị bụ Childhood Gender Dysphoria? Nke ahụ bụ ihe mgbagwoju anya. Aga m ekwu ebe a site na ihe ị ga - arụ ụka banyere ya bụ Akwụkwọ Nsọ nke ọrịa psychiatric. Ọ bụ nkọwa na-agbagha agbagha, mana ọ na-ekwu na Gender Dysphoria bụ nnukwu nsogbu nhụjuanya ma ọ bụ mmerụ ahụ n'ụlọ akwụkwọ mmekọrịta ma ọ bụ akụkụ ndị ọzọ dị mkpa nke na-arụ ọrụ n'ihi enweghị nsogbu dị n'etiti onye nwere ahụmịhe, ọrịa strok, gosipụtara okike ma kenye okike.
Ngwanụ ihe nke ahụ pụtara n'ụwa? Nke ahụ pụtara na nwata nwoke, dịka ọmụmaatụ, n'agbanyeghị eziokwu ahụ na ọ toro ya maka mmekọahụ, na-eche na ọ bụ nwa agbọghọ. Ma ọ bụ mee ka o chee na ọ bụ nwa agbọghọ ma ọ bụ n'ụzọ ọzọ. Yabụ, enwere nsogbu dị n'etiti chromosomes na nkwupụta nke chromosomes, nke bụ akụkụ ahụ dị na mpụga na ihe nwatakịrị ahụ kwuru na ya chere na ọ bụ. Ugbu a, nke a na - agbagha n'ihi na ndị ahụ kwere na echiche nke oke mmiri nke nwoke na nwanyị; na enweghi ihe dika nwa agbogho na nwoke na anyi no ebe nile n’etiti ha, ha na ekwu, “odi, dobe, nke ahu adighi nma. Ọ bụ ihe dị njọ nwata nwoke iche na nwa agbọghọ ka ọ bụ. ” Ọfọn, olee ebe ọnya dysphoria dị na ya? Ọnwụ dysphoria na-abịa ma ọ bụrụ na nwatakịrị ahụ n'ụzọ ụfọdụ ma ọ bụ nwee iwe ọzọ. Anyị na-ekwu na anaghị arụ ọrụ nke ọma n'ihi ọgba aghara a. Ọfụma kpọgidere. Onye na-enye aghara? Ọ bụ ebubo ọha na-enye ọgba aghara n'ihi na ọha mmadụ agaghị anabata.
Yabụ, na ihe ndị na-akwado echiche a na-ekwu, “Nke a bụ ihe nkịtị ka ị ghara ịbụ nwa nwoke ma ọ bụ nwanyị. Anyị niile nọ n’etiti. Ọ bụrụ na ọnọdụ ahụ adịghị gị mma, ọ bụ ya kpatara ọha na eze n'ihi na ọ naghị anabata gị. ”
Ugbu a ọ bụ azụmaahịa dị egwu ma anyị na-aga n'okwu ndị na-esote iji lelee ihe ọgwụgwọ maka nke a bụ. Ọgwụgwọ m ga-achikota bụ n'ezie nnukwu, nnukwu, nnabata a na-apụghị ichetụ n'echiche n'ime uche na n'ezie ahụ nwatakịrị ahụ. Nke pụtara nke ọma ma ọ dịkarịa ala nkedo. E nwere nnukwu mkpa, ihe egwu, na nchoputa a ka anyị ga-ekwu maka ya.
Yabụ, echere m na nke a abụghị na mbụ. Echere m na nke a bụ ọgụgụ isi. Echere m na ọ bụ mgbasa ozi na-enweghị atụ na-akwado ya ma nyekwa ya nduzi site na weebụsaịtị yana nyekwara ya ntụziaka site na ihe a na-akpọbu Mmemme Schoolslọ Akwụkwọ Nchedo ma ugbu a ọ na-apụta na mmemme Resilience, Rights and Respectful Relations, na-esite n'aka onye ọ bụla dere usoro ọmụmụ na ụlọ akwụkwọ. Yabụ, echere m na ọ bụ nje mmekọrịta mmadụ na ibe ya, ihe dị egwu, n'ihi ihe nwatakịrị ahụ metụtara.
Vidio 1 - Dysphoria nke Nwata - Nkọwa nke Mmekọahụ. (Akụkụ 1) Pịa> Iji budata PDF ebe a.
CAUSE (Coalition megide Education Achọghị Mmekọahụ.) Australia.
CAUSE na-ekele Prọfesọ Whitehall ikele ya maka inye oge ya na nka ya na vidiyo ndị a.
A KWES CAR CA ya n'ihi na ndị nne na nna na-enwekwu egwu banyere ihe ndị metụtara mmekọahụ na echiche ụmụ nwoke na nwanyị ha chọpụtara na a na-akụzi ụmụ ha n'ụlọ akwụkwọ.
Vidio ndị a na-ekwupụta echiche a na-akụzi na Schoolslọ Akwụkwọ Nchekwa, Resilience, ikike na nkwanye ùgwù mmekọrịta, na ọtụtụ mmemme Mmekọ Mmekọahụ ndị ọzọ, a kuziri na Schoolslọ Akwụkwọ Ọchịchị Victoria. Anyị na CAUSE na-ekwupụta na mmadụ niile ha nhata.
Anyị na-ekwusi ike na, n'ime iwu Australia, mmadụ niile nwere ikike ibi ndụ ha dịka ha chọrọ. Ọzọkwa, anyị kwenyere na e kwesịrị ịzụlite ụmụaka n’ime omume ọma dị ka ndị mụrụ ha na-ezi. Vidiyo a na iri na otu nke ọzọ na Childhood Gys Dysphoria na ọtụtụ ozi ndị ọzọ nwere ike ịchọta na weebụsaịtị anyị.